IJumbo Tube Skid Container, iChina Jumbo Tube Skid Container abavelisi, abaXhobisi, Ifektri - Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Izikhongozeli ze-SinoCleansky jumbo tube ziveliswa ngokwe-ISO11120, DOT, okanye i-ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela lesithathu elilinganayo lehlabathi.
Indawo yokugcwalisa kubandakanya i-CNG kunye neegesi ezahlukeneyo zorhwebo ezinje ngeArgon, iNitrogen, iHelium, iHydrogen, iGesi ehlanjululweyo njl.
Uhlobo oludumileyo lweRhasi yezoRhwebo kunye ne-CNG
Uhlobo lokuKhanya kwe-CNG
I-jumbo tube skids inengxelo yovavanyo lomntu wesithathu kunye nengxelo eneenkcukacha zomzi-mveliso. Ingxelo yovavanyo lomntu wesithathu ibandakanya uvavanyo kwisilinda nganye, kunye novavanyo lokuqina komoya weskid. Ingxelo yomzi-mveliso iya kubandakanya isiQinisekiso soMgangatho, iNcwadi yokuFundisa, ingxelo yovavanyo lwefektri, njl.
Luhlobo luni lwegesi eza kusebenzisa olu hlobo lwesikhongozeli?
Isikhongozeli singasetyenziselwa i-CNG kunye neegesi ezahlukeneyo zorhwebo ezinje ngeArgon, iNitrogen, iHelium, iHydrogen, iGesi ehlanjululweyo njl.
Izilinda zethu zejumbo zenziwe ngokwe-ISO11120 / DOT / ASME esemgangathweni, kwaye sinokunika ingxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, i-LRS, i-TUV okanye iqela lesithathu elilinganayo lehlabathi. Ukongeza, iisilinda zethu zejumbo zinokuqinisekiswa yi-TPED enophawu lwe-,, ezinye iimodeli zeJumbo Tube Skid yethu iqinisekisiwe yi-ADR, kwaye ezinye iimodeli zinokuqinisekiswa ngokweemfuno zabathengi.